Zute oke nkịta nnukwu Dane Chihuahua - Dịrị
Zute oke nkịta nnukwu Dane Chihuahua
Mgbe ị na-eche obere Chihuahua na nnukwu Great Dane, abụọ ndị a dị ọcha dị ka otu n'ime ahịhịa ndị na-agaghị ekwe omume ịkọkọ ọnụ.
Mana emeela ya. A makwaara dị ka Chi-Dane-Dane ma ọ bụ Nnukwu nkịta Mexico , a crossbreed ga-eju gị anya.
Zute nkịta kachasị elu Great Dane na obere nkịta Chihuahua
Nọgide na-agụ iji chọpụta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ngwakọta Great Dane Chihuahua.
Isi: Gini bu Chi-Dane-Dane?
Ọ ga - ekwe omume inwe ngwakọta n’etiti Nnukwu Nwa na Chihuahua?
Kedu ihe ngwakọta Great Dane Chihuahua dị?
Okpu: Ndi Chi-Dane-Danes di ezigbo anu ulo?
O siri ike ilekọta ngwakọta Chihuahua-Great Dane a?
Ahụike: Onye Dan Chiukwu Chihuahua ọ na-agwakọta ogologo ndụ?
Na-achọ Great Dane Chihuahua mix maka ọrịre
Mkpebi banyere nnukwu Dane Chihuahua mix
Dị ka aha ya na-egosi, nkịta a na-emepụta ihe bụ ngwakọta n’etiti Onye Ezi Ugwu na Chihuahua. Dị ka ọtụtụ ụdị dị iche iche agwakọtara, enweghị ọtụtụ akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ akwụkwọ gbasara mgbe e kere ha kpọmkwem.
Ọ dabara nke ọma, ịmata ụdị nne na nna ọ bụla ga-enyere anyị aka ịghọta nke ọma ụmụ ha ndị bụ ngwakọ.
Nkịta kachasị elu n'etiti mmadụ niile - Nnukwu Onye
Akwa Taa ziri ezi mara maka nnukwu oke ha . Ma n'azụ ọdịdị na ọdịdị ahụ na-eyi egwu, enyi na enyi, onye nwere ndidi, na onye a pụrụ ịtụkwasị obi dị.
N'ihi ya, aha otutu ha - 'Onye Nnukwu Onwe Mfe' ma ọ bụ 'Apollo nke Nkịta.'
Fido a mara mma ma dị njikere adị adị kemgbe 1600s. Ọ bụ ndị Jamani zụrụ ha iji chebe ụgwọ mgbe ha na-ehi ụra, nke nyere ha aha ọzọ - 'Nkịta Chamber.'
Ejikwala ha maka ịchụ nta, anụ ọhịa bea, na anụ ọhịa.
Na-eche ka nnukwu Danes dị ukwuu? Ha dị elu nke 28 ruo 34 sentimita (71 ruo 86 cm) na ịdị arọ nke 100 ruo 175 pound (45 ruo 79 n'arọ). Fọdụ nwere ike ịdị arọ dịka kilogram 91 (kilogram 91).
Dị ka nkịta dị elu nke na-egosi ịdị mma na nguzozi, ha bụ ezigbo ndị enyi na-anabata obere ihe na ndị bịara abịa.
Nwa pere mpe nke Chihuahua
Zute Chihuahua, obere nkịta dị n'ụwa
N'aka nke ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, nha nha Chihuahua bu ndị kasị nta na nkịta ìgwè .
N'agbanyeghị obere ogo ha, Chihuahuas nwere omume na-apụ apụ. Ha bụ ndị enyi na-atọ ụtọ na-amasịkarị ịmakụ ma na-eche nche dị mma.
Chis na-eche na ha bụ nnukwu nkịta, amaara dị ka Obere Nkịta Ọrịa ma ọ bụ Mgbidi Napoleon , ma ga-echebe onye nwe ha mgbe niile!
Can nwere ike ịchọta Ihe nnọchianya mba Mexico ya na Isi apụl ma ọ bụ isi ele . Offọdụ n’ime ha nwekwara uwe ogologo, ebe ndị ọzọ nwere obere aji.
A na-ahụkarị ha na ntị ntị ha ziri ezi na anya buru ibu, na-ekwupụta. Ha dị ihe dị ka sentimita 6 ruo 10 (15 ruo 25 cm) n'ogologo ma dịrị kilogram 3.5 ruo 7.5 (kilogram abụọ ruo atọ).
Ee, ọ bụ, mana ọ nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ. Nnukwu ọdịiche dị n'etiti Great Danes na Chis ga-apụta ọtụtụ ihe mgbochi maka ndị na-azụ anụ na-anwa ịmepụta nkịta a - nke siri ike.
Hodszọ & nsogbu nke ịzụlite ngwakọta Chihuahua Great Dane
Na-aga maka usoro ozuzu okike doro anya na ajụjụ. Onye ọ bụla na-anwa ime otú ahụ na-emegbu ụmụ anụmanụ . Nanị iche echiche banyere nwoke Great Dane arịgoro nwanyị Chihuahua bụ ihe nzuzu.
Mgbe ahụ, nwanyị Chi ga-enwe nnukwu nsogbu ịnwale ibu ụmụ nkịta na-ebu ibu, nke nwere ike ibute mama na ụmụ ya.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị gbanwee okike, nwoke Chihuahua enweghị ike iru nwanyi Great Dane ka ọ lụọ.
Dọ aka ná ntị: Vidio a nwere ike ịnwe ọdịnaya dị nro, mana ọ na - egosi ihe kpatara Onye Ukwu Dane na Chihuahua, nke kachasị ibu na nke pere mpe, enweghị ike ịlụ di na nwunye:
I nwere ike iche - “Enwere Ọgwụ Artificial (AI) ugbu a, gịnị ma ị nwaa nke ahụ? ” Ọ bụ ụzọ isi gafere ụdị okike nke imepụta, ọkachasị maka obe obe, mana ọ naghị adị mfe mgbe niile. Na mgbakwunye, ọ dị oke ọnụ.
A gbalịrị usoro mmeputakwa a iji mepụta ngwakọta Great Dane Chihuahua.
Ha tinyere chihuahua na teknụzụ ọfụma. Ma otu nsogbu ahụ banyere ịdị ime na ịmụ ụmụ nkịta buru ibu ghọkwara ihe mgbochi.
Ọbụna ma ọ bụrụ na emechara C-cesarean, nne na ihe mkpofu ya na-anwụkarị.
Nwa ebu n’afọ na-etokwa ngwa ngwa ebe ha ka na-arụ ọrụ. Ọ bụ nnọọ ihe na-agbawa obi.
Maka ndị Chihuahuas ole na ole ahụ lanarịrị, ọgụ ọzọ na-enye ụmụ ha ara bụ. Ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume, ndị nwe ya na ndị na-azụ ya ga-eji aka ha nye ụmụ ha nri .
Ọ bụghị naanị na ohere nke ụmụ nkịta na-eme ya mgbe ụbọchị ole na ole gachara, mana mkpụrụ ndụ ihe nketa bukwa okwu.
Maka ndị ahụ siri ike, Great Dane Chihuahuas ndị nwere ike iru ogo ha, ha nwere nnukwu isi yiri nke ahụ Greyhound .
Ha yikwara Dachshund n’ihi ogologo ha na ụkwụ ha dị mkpụmkpụ.
N'ihe banyere uwe na agba ha, ha nwere ike keta ụdị aji ọ bụla na ndo ndị mụrụ ha nwere. Naanị oge ọ ga-enwe uwe ogologo ma ọ bụrụ na ọ bụ nne na nna Chihuahua nwere ogologo ntutu.
Size: Kedu otu ibu nnukwu Dane na Chihuahua toro eto?
Na nnukwu ọdịiche dị n'agbata ụdị nne na nna ya, ogo nkịta a na ịdị arọ ga-abụ ihe ịma aka ịkọ. Mana nke a na - ebute obe ga - abụkarị okpukpu abụọ nke Chihuahua mana ụzọ dị obere karịa Onye Ukwu.
E wezụga nke ahụ, ebe ọ bụ na ha abụghị nnukwu, ha na-eme nnukwu nkịta ụlọ.
Ma Chihuahua na Great Dane di na-eguzosi ike n'ihe canines , nke ụmụ ha nwere ike inweta. Ha bụ enyi na enyi nkịta ndị na-emepụta ihe ga-atọ gị ụtọ.
Otú ọ dị, anyị ga-atụle àgwà ọjọọ Chihuahua, karịsịa mgbe ha na-enwetaghị ụzọ ha. Chi-Dane-Danes nwere ike ịbụ dị obi ọjọọ ma na-atụ ụjọ mgbe ha nwere. Nke ahụ mere ọbụna ha ezigbo nche.
Ha nwere nke ahụ Obere Nkịta Ọrịa na Chihuahuas na umu anumanu ndi ozo na-enweta, ebe ha na amaghi oke ha ma gha eme ihe obula iji chebe umu mmadu.
Great Dane Chihuahua mixes nwekwara ike ịbụ ezigbo ike. Ozugbo a kpasuru ha iwe, ha nwere ike isiri gị ike ijikwa , ya mere, ọ kachasị mma ịzụ na mmekọrịta mmekọrịta ozugbo enwere ike. Nke ahụ gụnyere ọzụzụ nrubeisi.
The Great Dane & Chihuahua cross is a mmezi dị ala pooch. Ndị nne na nna ahụ dị nwayọọ nwayọọ, ha na-achọ obere mmega ahụ.
Gba ọsọ ngwa ngwa gburugburu ogige ahụ ma ọ bụ ogige doggy ga-ezuru iji mee ka ìgwè a agwakọta nwee obi ụtọ na ahụike.
Maka nri ha, ọ na-abụkarị ntọala nkịta ọ bụla. Ọ kwesịrị ịdabere na oke nkịta oke Mexico gị, afọ, ogo ọrụ, yana ahụike.
Anyị na-akwado ịdị mma akọrọ dị elu na ị ga-enye anụ ụlọ gị nkwonkwo mmeju - onye nwere mmanụ azụ, chondroitin, na glucosamine.
Nke ahụ pụtara overfeeding bụkwa a-mba . Babiesmụaka ajị ajị anụ ndị mara mma, mana ọ nwere ike ime ka ọrịa ka njọ.
Ndụmọdụ nri anyị nyere gị banyere nri nwere ike bụrụ ihe ngosi maka ihe obe a na-adịkarị mfe. Ee, nke ahụ ziri ezi - ikiaka na hip dysplasia .
Fido a nwekwara ike keta ụfọdụ nsogbu ahụike nke Chihuahua na Great Dane na-eche ihu.
Ma na kwesịrị ekwesị na-elekọta, mgbe nile nnyocha, na-na ndị dị mkpa yana ịgba ọgwụ mgbochi, gị Chi-Dane-Dane kwesịrị ịnụ ụtọ ndụ dị n'etiti ogo ndụ nne na nna ya .
Chihuahua nwere ike ibi site na afọ 12 ruo 20, ebe Onye Nnukwu Onye ahụ nọ gburugburu afọ 7 ruo 10.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta onye mmebe a, ị na-achọ onye na-azụ aha ya na-enweta nnukwu Dane Chihuahua mix nwa nkịta ga-abụ ihe ịma aka ọzọ.
Ewezuga usoro ịzụlite ozuzu, ị ga-etinyekwa ụfọdụ mgbalị iji nyochaa ebe a na-azụ anụ ma chọpụta etu nkịta ha na akwa ha dị.
N'ihi nnukwu ụgwọ na ihe egwu dị na ya na crossbreeding a Great Dane na Chihuahua, ha ga-adị oke ụkọ. Ma anyị ekwesịghị ịkwụsị inwe olileanya!
Great Dane Chihuahua mix breeders & nnapụta
Anyị enweghị ike ịchọta ezigbo onye na-azụ ma ọ bụ ụlọ nkịta na-ere Great Dane Chihuahua mix puppies mana ịlele ndị otu nnapụta kwesịrị ka agbapụ.
Ha na-enye nri dị ọcha, dị ka Great Dane na Chi, yana crossbreeds ha.
Ọ bụrụ na ị chọpụtala ebe obibi dị nso na nso gị, weebụsaịtị ndị a nwere ike ịbụ mmalite dị mma. Ọ bụrụ na ha enweghị Chi-Dane-Dane maka ikuchi, ị nwere ike ịhụ mmụọ ozi ajị anụ nke ga-adị ka ịhụnanya n'anya mbụ.
Rocky Mountain Great Dane Nnapụta (Lakewood, CO)
San Antonio Great Dane Nnapụta (Pipe Creek, TX)
Enchantment Chihuahua Nnapụta, LTD. (Albuquerque, NM)
Limbo Chihuahuas & Chihuahua Mix Nnapụta Ugochukwu Onwuchekwa
Nnukwu Onye Dane nwere ike ime ime Chihuahua?
Eeh, ma nne Chihuahua na ụmụ nkịta agaghị alanarị afọ ime n'onwe ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ mụọ, ọ ga-enwe nsogbu ịmụ nwa, ma nnyefe nkịtị na ịkpụ afọ (CS).
Nanị ụzọ nke obe a ga-enwe ohere ịga nke ọma bụ site na insemination (AI), ebe Great Dane bụ nne.
Chihuahuas enwere ike ịlụ nnukwu nkịta?
Ọ na-ajụ ya na nyocha ma ọ bụrụ na obere nkịta nwere ike ịlụ na nnukwu ìgwè, azịza ya bụ ee. Ọbụna ọ na - arụ ọrụ abụọ, mana nsogbu a ga - agbadata na obere canine ịbụ nwanyị.
Ntughari a nwere ike imeputa umu nkita di oke ibu nke Chi ga ebu.
O nwere ike ịbụ na ọ ga-ekwe omume ịgwakọta Chihuahua na Great Dane, mana ma ọ bụ ụkpụrụ iji mee nke a, na-ahapụ ọtụtụ ajụjụ ajuju.
Obere ụkọ nke Nkịta Ukwu Mexico pụtara na ọ nwere obere ozi gbasara ha.
N'ikpeazụ, ịzụlite Great Dane na Chi ọnụ ga-ebulite okwu ndị ọzọ. Ma ndị nwere ụdị ngwakọta a nwere obi ụtọ na enyi ha.
Kedu ihe ị chere maka nnukwu dane Chihuahua mix? Mee ka anyị mara site na ịhapụ okwu n'okpuru.
Kedu ihe bụ nkịta ndị yiri nkịta ọhịa?
cocker spaniel na ọlaedo retriever mix
lab lab gold retriever mix nwa nkita
maltese shih tzu mix nkịta